Runtii Kulmiyihii Cusbaa Xero-Jin Buu Galay. Muusaa Yaabay-Muusaa Yaabay. | Baligubadlemedia.com
Runtii Kulmiyihii Cusbaa Xero-Jin Buu Galay. Muusaa Yaabay-Muusaa Yaabay.
Wadanka Somaliland isbedel baa ka socda aad u ballaadhan baahi bulshada reer Somaliland qabto shan sanona qabtay ka dib markii dhibaatooyin badan oo xoog waaweyn dalkii ka dhaceen ayna arki waayeen xukuumad daacad dalka iyo daka u ah oo is hagar la’aan ah
U caawisa una garab gasha. Dhibaatooyinka dadka weli haya qaarna riiqdoodii ay ku jiraan waa ka mida abaarihii is daba joogga ahaa ee dawladda kumiye u nixi weyday dalka ee xitaa meelihii boqolkiibal laga soo doortay Kulmiye dad badan isdeldeleen markay dumarkii iyo caruurtii waxay siiyaan waayeen dawladna waxba u keeni weyday. Dhibaatada guri kasta gashay ee cid walba
saamaysay waxay noqotay sicir bararka Xukuumaddu si muuqata dadka hortooda ugu samaysay ee lacago foojiriya daabacatay ee doolarkii urursatay shillinkii Somaliland na uu cirka galay ee waxba la karsan kari layey.
Bilaayada kalee weyn ee xukuumadda itaaldaradeeda ka timi waa xoolihii oo la joojiyey oo cudurro lagu sheegay taa wey u dhaqaaqi weyday. Ta afraad een hore dunida loogu arag waa madaxweynihii Kulmiye ee ummaddoo dhami wada dooratay oo amarka ilaahay waxaa soo dhibaata waaweyn ah iyo kumaankun dhibaatoo ka dhacay dalka intuu joogay Siilaanyo oo mar qudha intuu dadka soo hor kadaloobsaday aan ka hadal( no talk, no exchange, no dialogue, no communication, no even expression). Bilaayada kalee Kulmiyaha cusubi xambaarsanyey waa Askar ciidan ay ku dagaal galaan siday u dhisi lahaayeen mooyee aan horuumar adduun ku jirin qabigooda. Intaasoo dhami waxay is ku noqdeen marka la isu geeyo XERO-JIN OO MUSE BIIXI GALAY.
Kulmiyaha cusub baaba,a ku dhacaya casaankiisii baa gobolkasta ka muuqday. Maanta hubaal qof kasta oo Kumliyaha cusub taageersanaa waxaa madaxiisa ku soo dhacaya siduu u geli lahaa Xusbiga Wadani, waayo biliaadanku waa rajo ku nool, inuu Kulmiye cusubi dhacay bari iyo galbeed iyo inta u dhexeysa waa laga arkaa. Xitaa dawladii waaweynaa way sheegeen sadaasha wadani xidhiidho badan baa hoggaanka Wadani ku socda.
Usbuucan soo socda wax badan oo isbedela ayaa la arki doonaa xitaa Madaxtooyada isha ku haya Muse Biixi na rafadkiisa u fiira yeesha.
MUUSAA YAABAY, MUSAA YAABAY, MUSAA YAABAY.
M Bashe (Meerkat).